ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ - Infinix
ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒသည် Infinix နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များ (“Infinix”၊ “ကျွန်ုပ်တို့”၊ “ကျွန်ုပ်တို့ကို”၊ “ကျွန်ုပ်တို့၏”) သည် သင့်အချက် အလက်များကို မည်သို့ စုဆောင်း၊ ပြင်ဆင်၊ အသုံးပြု၊ မျှဝေ၊ ထုတ်ဖော်၊ သိမ်းဆည်း၊ ထိန်းသိမ်း၊ ကာကွယ်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြပေးထားပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုလျှင် ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒပါ လုပ်ဆောင်မှုများအား သင်လက်ခံသည်ဟု ယူဆမည် ဖြစ်သောကြောင့် ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒကို ဖတ်ရှုရန် အရေးကြီးပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒပါ လုပ်ဆောင်မှုများအပေါ် စိတ်ကျေနပ်မှု မရှိပါက ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးမပြုသင့်ပါ။
I. သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းခြင်း
1. သင်တိုက်ရိုက် ပေးအပ်ထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ
ကျွန်ုပ်တို့၏ တရားဝင် အင်တာနက်စာမျက်နှာ infinixmobility.com (“ဝက်ဘ်ဆိုက်”) မှ ရရှိနိုင်သည့် ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ထံတွင် အကောင့်တစ်ခု စာရင်းသွင်းလျှင်ဖြစ်စေ သင့်အမည်၊ အီးမေးလ်လိပ်စာ၊ စာပို့ရန်လိပ်စာ၊ အသုံးပြုသူ ID၊ စကားဝှက်၊ ဖုန်းနံပါတ်၊ ဖက်စ်နံပါတ်၊ ဦးစားပေး ဆက်သွယ်နည်း၊ မွေးသက္ကရာဇ်၊ နေရပ်၊ ဓာတ်ပုံများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် နောက်ခံအချက်အလက်များ (ကျား/မ၊ အသက်၊ အလုပ်အကိုင်၊ ကုမ္ပဏီ သို့မဟုတ် အဖွဲ့အစည်း အမည်၊ ဦးစားပေးသုံး ဘာသာစကား၊ မြို့၊ နိုင်ငံ၊ စာတိုက်အမှတ်၊ နယ်မြေကုဒ်၊ အချိန်ဇုံ စသဖြင့်) အပါအဝင် တစ်ခုတည်းဖြစ်စေ၊ အခြားအချက်အလက်များနှင့် တွဲ၍ဖြစ်စေ သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားနိုင်သော၊ ဆက်သွယ်နိုင်သော၊ အခြားတစ်စုံတစ်ဦးကို မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်း ခွဲခြားနိုင်သော သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ပေးအပ်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ထံမှ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များကို ဝယ်ယူခြင်းဖြစ်ပါက အမှာစာအမှတ်၊ ငွေလွှဲပြောင်းမှု ရာဇဝင်၊ ဝယ်ယူသည့် နေ့ရက်/အချိန်၊ ထုတ်ကုန်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် မှားယွင်းမှုစာရင်းများ၊ ငွေပြန်အမ်းသည့် ရာဇဝင်၊ အကြွေးဝယ်ကတ်နှင့် ငွေပေးကတ်ဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ သို့မဟုတ် အခြားငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ငွေစာရင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ သင့်ထုတ်ကုန်အား တိကျစွာ သို့မဟုတ် အကြမ်းဖျင်း နေရာပြသမှု၊ သင့်ထုတ်ကုန်နှင့် ပတ်သက်၍ ငွေပြန်အမ်းခြင်းနှင့် ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ၊ ထုတ်ကုန်များ သို့မဟုတ် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် သက်ဆိုင်သော ပြောကြားချက်များ သို့မဟုတ် တုံ့ပြန်အကြံပြုချက်များနှင့် အခြား အများမသိနိုင်သည့် အချက်အလက်များကို ကောက်ယူသွားနိုင်ပါသည်။ သင်ပေးအပ်ထားသည့် အချက်အလက်များကို သင်ဝန်ဆောင်မှုများ အသုံးပြုရာတွင် တွဲစပ်ရွေးချယ်ခဲ့သည့် လူမှုရေး အကောင့်များ အပါအဝင် အခြားရင်းမြစ်များမှ ရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များနှင့်ဖြစ်စေ၊ အခြားကုမ္ပဏီများမှ ရရှိသည့် အချက်အလက်များနှင့်ဖြစ်စေ တွဲ၍သိမ်းဆည်းနိုင်ပါသည်။
2. ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ မဟုတ်သော အချက်အလက်များ
ကျွန်ုပ်တို့သည် ဟာ့ဒ်ဝဲမော်ဒယ်၊ ကိရိယာအား ခွဲခြားမှတ်သားမှု (ဥပမာ - IMEI၊ MEID၊ စီရီယယ်နံပါတ်၊ CID၊ MID နှင့် MCC ID နံပါတ် သို့မဟုတ် SIM ကတ် ID)၊ MAC လိပ်စာ၊ သင့်ကိရိယာကို စတင်ဖွင့်သည့် နေ့စွဲ၊ သင့်လည်ပတ်မှုစနစ် (OS) အမျိုးအစားနှင့် ဗားရှင်း၊ သင်ကြည့်ရှု/အသုံးပြုသော အကြောင်းအရာနှင့် အချိန်မှတ်သားထားသည့် ဒေတာဖလှယ်မှု မှတ်တမ်း၊ အင်တာနက် ပရိုတိုကော (IP) လိပ်စာ၊ အသုံးပြုပုံ ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ၊ စွမ်းဆောင်ရည် ကိန်းဂဏန်း အချက်အလက်များ၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှု ရာဇဝင်၊ မြေနေရာအရ တည်နေရာ၊ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုချိန်၊ ဘရောက်ဇာ အမျိုးအစား၊ ကုမ္ပဏီဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ မဝင်မီနှင့် ဝင်ပြီးချိန်တွင် သွားရောက်ခဲ့သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ သင့်အင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးသူ၏ ဒိုမိန်းအမည်၊ သင်ဒေါင်းလုပ်ရယူ၍ ထည့်သွင်းထားသည့် အပလီကေးရှင်းနှင့် ဆော့ဖ်ဝဲများ၊ သင့်ဆယ်လူလာ ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသည့် ကယ်ရီယာ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများမှတစ်ဆင့် အကြောင်းအရာနှင့် အက်ပ်များနှင့် သင်ဆက်နွယ်မှုတို့ အပါအဝင် ကိုယ်ရေးအချက်အလက် မဟုတ်သည့် အချက်အလက်များကိုလည်း ကောက်ယူသွားနိုင်ပါသည်။ အများမြင်နိုင်ပြီး စီးပွားဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည့် ရင်းမြစ်များမှ (ဥပဒေခွင့်ပြုချက်အရ) ဖြစ်စေ၊ အခြား တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီ ကုမ္ပဏီများမှ လူမှုကွန်ရက် ဝန်ဆောင်မှုများကို သင်အသုံးပြုချိန်တွင် ၎င်းဝန်ဆောင်မှုများမှ ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုများတွင် ကြော်ငြာများ ထည့်ရန်အတွက် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီ ကြော်ငြာ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုရာတွင်ဖြစ်စေ သင်နှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို ကောက်ယူနိုင်ပါသည်။ ၎င်းကြော်ငြာများ ပြသပေးရန်အတွက် အခြား တိုက်ရိုက် ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီကုမ္ပဏီသည် အထက်ဖော်ပြပါ အချက်အလက်များအပြင် သင်နှင့် သင့်ကိရိယာနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်အား သင်အသုံးပြုခြင်းဆိုင်ရာ သင့်အချက်အလက်များကို အလိုအလျောက် ကောက်ယူသွားမည် ဖြစ်သည်။
ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒအတွက်မူ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း တိုက်ရိုက် ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီ အဖွဲ့အစည်းများသည် ၎င်းတို့စုဆောင်းခဲ့သော အချက်အလက်များကို Infinix ထံ မျှဝေပေးနိုင်ပြီး ထိုသို့မျှဝေမှုသည် သင်နှင့် ၎င်းတိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီတို့အကြား ရှိထားနိုင်သည့် လျှို့ဝှက်ပေးရေး သဘောတူညီချက်ကို ချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်ဟု မသတ်မှတ်နိုင်ကြောင်း သဘောတူပါသည်။ ထို့ပြင် Infinix မှ အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့်ပုံစံအတိုင်း တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီများထံမှ သင်နှင့်သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များကို စုဆောင်းသည့်အတွက် သင့်အချက်အလက်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်နှင့် ၎င်းတိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီများအကြား ရှိနိုင်သည့် လျှို့ဝှက်ပေးရန် သဘောတူညီချက်များကို လိုက်နာရမည်ဟု မသတ်မှတ်နိုင်ပါ။
II. အချက်အလက်များကို ပြောင်းလဲပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အသုံးပြုခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် အတည်ပြုချက်များ၊ ငွေတောင်းခံလွှာများ၊ လုံခြုံရေးဆိုင်ရာ သတိပေးချက်များနှင့် အကူစာတိုပေးပို့ခြင်းတို့ အပါအဝင် သင့်အမှာစာများကို စီစဉ်ရန်နှင့် စိစစ်ဆောင်ရွက်ပေးရန်၊ သင့်ဝယ်ယူမှုများနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းချက်များ၊ ကန့်သတ်ချက်များနှင့် မူဝါဒများ ပြောင်းလဲမှုများနှင် ပတ်သက်၍ ဆက်သွယ်မှုများ ကဲ့သို့သော သင့်ငွေလွှဲပြောင်း ပေးချေမှုဆိုင်ရာ အသိပေးချက်များ ပေးပို့ရန်၊ သင်ဝယ်ယူထားသည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ထုတ်ကုန်များဖြင့် ပံ့ပိုးရန်နှင့် ပို့ဆောင်ပေးရန်၊ သင့်မေးမြန်းစုံစမ်းမှုများနှင့် ပြောကြားချက်များကို ပြန်လည်တုံ့ပြန်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ သင့်ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများကို ထိန်းသိမ်းပြင်ဆင်ရန် သို့မဟုတ် ပြင်ဆင်ရန်၊ Infinix ၏ ထုတ်ကုန်ကြေငြာမှုများ၊ ဆော့ဖ်ဝဲ အပ်ဒိတ်များနှင့် ရှေ့လာမည့် ပွဲများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင်မျက်ခြေမပြတ်စေရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များ၊ ဝန်ဆောင်မှုများ၊ ဝက်ဘ်ဆိုက်များ၊ ဈေးကွက်ချဲ့ထွင်ရေးနှင့် သုံးစွဲသူထံ ဆက်သွယ်ရေးတို့ကို ကျွန်ုပ်တို့အား ကူညီဖန်တီး၊ ကိုင်တွယ် အဆင့်မြှင့်ပေးရန်၊ လိမ်လည်မှုများ၊ ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ သို့မဟုတ် တရားမဝင် လုပ်ဆောင်မှုများအား စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်၊ စာရင်းစစ်ဆေးခြင်း၊ ဒေတာခွဲခြမ်းစိစစ်ခြင်း အစရှိသည့် ဌာနတွင်း လုပ်ငန်းများတွင် အသုံးပြုရန်၊ Infinix မှ ပံ့ပိုးပေးလျက်ရှိသည့် ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်သော လျော့ဈေးကမ်းလှမ်းမှုများနှင့် ဆုကြေးများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင့်ထံဆက်သွယ်အသိပေးရန် (ဤအရောင်းမြှင့်တင်ရေး အီးမေးလ်တစ်စောင်စီတွင် ပါရှိသည့် မှာယူမှုရပ်တန့်ခြင်း လင့်ခ်ကိုနှိပ်ပြီး ထိုမေးလ်များကို ဆက်မယူရန် ရွေးချယ်နိုင်ပါသည်)၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုများအား သင်ယခင်သုံးစွဲမှုများအပေါ် မူတည်ပြီး သင်နှင့်အပြည့်အဝ ကိုက်ညီသည့် ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးရန်နှင့် အကြံပြုချက်များ ပေးရန်၊ သင်နှင့်ထပ်တူကျသော ကြော်ငြာများ ကြော်ငြာပေးနိုင်ရန်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ပတ်သက်ပြီး သင့်အမြင်ကို တောင်းခံနိုင်ရန်နှင့် သုံးစွဲသူများထံမှ စစ်တမ်းကောက်ယူမှုများ လုပ်ဆောင်ရန် သင့်အချက်အလက်များကို ပြုပြင်လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းများ ရှိနိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများ သို့မဟုတ် ထုတ်ကုန်များကို သင်အသုံးပြုလျှင်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ သင်လာရောက်လျှင်ဖြစ်စေ အချက်အလက်များကို စုဆောင်းရာတွင် ကွတ်ကီးများ၊ web beacon (ဝက်ဘ်အချက်ပြမှုများ)နှင့် Local Shared Objects (LSO များ၊ “Flash Cookies” ဟုလည်း ခေါ်သည်) ကဲ့သို့သော အခြားနည်းပညာများ အပါအဝင် မတူညီသော နည်းပညာအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုလျက် ရှိပါသည်။ ကွတ်ကီးများသည် သင့်ကွန်ပျူတာ၊ မိုဘိုင်းဖုန်း သို့မဟုတ် အခြားကိရိယာတို့တွင် အချက်အလက်များ သိမ်းဆည်းပေးသည့် ဖိုင်ငယ်များ ဖြစ်ကြပါသည်။ ၎င်းတို့သည် သင့်ဒေတာနှင့် စာလုံးအရွယ်အစား ကဲ့သို့သော ဆက်တင်များနှင့် အခြားသင်နှစ်သက်ရာများကို မှတ်သားထားနိုင်ပြီး ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများကို အရောင်းမြှင့်တင်ရန်နှင့် သင့်အတွေ့အကြုံကို တိုးမြှင့်ပေးရန်အတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်နှင့် သင်အပြန်အလက် ဆက်သွယ်မှုကို ခွဲခြမ်းစိစစ်ရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ၎င်းတို့သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်မှ မည်သည့်အပိုင်းများ၊ မည်သည့် အင်္ဂါရပ်များမှ ပိုမိုရေပန်းစားသည်ကို နားလည်သဘောပေါက်နိုင်ရန် အကျိုးပြုကူညီပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ၎င်းကွတ်ကီးများမှ စုဆောင်းရရှိသည့် အချက်အလက်များကို ရွေးချယ်ကြော်ငြာရာတွင်လည်း အသုံးပြုလျက် ရှိပါသည်။ ဝက်ဘ်အချက်ပြများမှာ အွန်လိုင်းအကြောင်းအရာများ၊ ဗီဒီယိုများနှင့် အီးမေးလ်များတွင် ထည့်သွင်းထားသည့် အီလက်ထရောနစ် ပုံရိပ်များဖြစ်ပြီး ဆာဗာမှ ၎င်းတို့ကိုသုံး၍ သင့်ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်းမှ အချို့သော အချက်အလက် အမျိုးအစားများကို ဖတ်ရှုပြီး ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုမှု အကြိမ်ရေကို ရေတွက်ပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် သင်ကြည့်ရှုသမျှအပေါ် အခြေခံပြီး သင့်စိတ်ကြိုက်ပုံစံများကို ကွတ်ကီးများသုံး၍ သိမ်းဆည်းကာ သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလျှင် သင့်စိတ်ကြိုက်ဖြစ်စေရန် ပြင်ဆင်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုချိန်တွင် သင့်ဘရောက်ဇာ ဆက်တင်များသို့ဝင်၍ ကွတ်ကီးများကို ဝင်ဖျက်နိုင်သလို သင့်ဘရောက်ဇာမှ “အကူအညီ” မီနူးကို ရွေးချယ်ပြီး ကွတ်ကီး အားလုံးကို လက်ခံမလား၊ ကွတ်ကီးအားလုံးကို ငြင်းပယ်မလား၊ ကွတ်ကီးတစ်ခု ပေးပို့ချိန်တွင် သင့်ကိုအသိပေးမလား ရွေးချယ်နိုင်ပြီး သင့်ကွန်ပျူတာတွင် ကွတ်ကီးများ မသိမ်းရန် တားဆီးနိုင် ပါသည်။ သို့သော်လည်း အချို့သော ဝန်ဆောင်မှုများမှာ ကွတ်ကီးများသုံး၍ အလုပ်လုပ်ရန် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားခြင်းဖြစ်သည့်အတွက် ကွတ်ကီးများကို ပိတ်လိုက်ပါက ၎င်းဝန်ဆောင်မှု တစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ အချို့သော အစိတ်အပိုင်းများကိုဖြစ်စေ သင်အသုံးပြုနိုင်စွမ်းကို ထိခိုက်လာ နိုင်ပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ဆောင်မှုများအား ဝင်ရောက်အသုံးပြုလျှင် သင်သည် သင့်ကိရိယာတွင် ကွတ်ကီးများ၊ အခြား စက်တွင်းသိုလှောင်မှု နည်းပညာများ၊ အချက်ပြများနှင့် အခြားအချက်အလက်များကို သိုလှောင်ခွင့်ပြုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် ၎င်းကွတ်ကီးများ၊ စက်တွင်းသိုလှောင်မှု နည်းပညာများ၊ အချက်ပြများနှင့် အချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့နှင့် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီ များမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခွင့် ပြုခြင်းလည်း ဖြစ်ပါသည်။
IV. တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီများထံ ထုတ်ဖော်အသိပေးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ကျွန်ုပ်တို့ လက်အောက်ခံ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လုပ်ငန်းမိတ်ဖက်များ သို့မဟုတ် သတင်းအချက်အလက် စိစစ်ပြောင်းလဲခြင်း၊ အကြွေးဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ဖောက်သည်များ၏ အမှာစာများကို ဖြည့်စည်းပေးခြင်း၊ သင့်ထံ ထုတ်ကုန်များ ပို့ဆောင်ပေးခြင်း၊ ဖောက်သည်များ၏ အချက်အလက်တို့ကို စီမံခြင်းနှင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုပေးခြင်း၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ထုတ်ကုန်များနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများအပေါ် သင့်စိတ်ဝင်စားမှုကို အကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ဖောက်သည်များဆိုင်ရာ သုတေသန လုပ်ဆောင်ခြင်း သို့မဟုတ် စိတ်ကျေနပ်မှု စစ်တမ်းကောက်ယူခြင်း ကဲ့သို့သော ဝန်ဆောင်မှုများ ပေးအပ်မည့် အဖွဲ့အစည်းများထံ သင့်အချက်အလက်များကို မျှဝေပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ဥပဒေအရဖြစ်စေ၊ တရားရေးရာ လုပ်ငန်းစဉ်အရဖြစ်စေ၊ တရားစွဲဆိုမှုများအရဖြစ်စေ၊ သင့်နိုင်ငံမှဖြစ်စေ၊ နိုင်ငံပြင်ပမှဖြစ်စေ အများဆိုင်ရာနှင့် အစိုးရဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များမှ သင့်အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်အသိပေးရန် တောင်းဆိုမှုများအရဖြစ်စေ လိုအပ်လျှင်လည်း သင့်အချက်အလက်များကို မျှဝေပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စည်းကမ်းချက်နှင့် ကန့်သတ်ချက်များကို ချမှတ်ရန် သို့မဟုတ် ကျွန်ုပ်တို့ လုပ်ငန်းများ သို့မဟုတ် အသုံးပြုသူများကို ကာကွယ်ရန်အတွက် ၎င်းတို့အား ထုတ်ဖော်အသိပေးရန် အကျိုးသင့် အကြောင်းသင့် လိုအပ်သည်ဟု သတ်မှတ်လျှင်လည်း သင့်အချက်အလက်များကို ထုတ်ဖော်ပြသနိုင်ပါသည်။ ထို့ပြင် ကုမ္ပဏီတည်ဆောက်ပုံ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အခြားကုမ္ပဏီနှင့် ပူးပေါင်းခြင်း၊ ကုမ္ပဏီလွှဲပြောင်းခြင်း သို့မဟုတ် ဒေဝါလီခံခြင်းများ ဖြစ်လာလျှင် ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်အားလုံးကို သက်ဆိုင်ရာ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီထံသို့ ထုတ်ဖော်အသိပေးနိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်ခွင့်ပြုချက် မရှိဘဲ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီများ၏ ကိုယ်ပိုင် သီးခြားဈေးကွက်ချဲ့ထွင်မှု သို့မဟုတ် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အသုံးပြုရန် မျှဝေပေးမည် မဟုတ်ပါ။
ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒအတွက် သင်သည် အထက်တွင် ဖော်ပြခဲ့သည့် မျှဝေခြင်း၊ ထုတ်ဖော်အသိပေးခြင်းနှင့် သင့်အချက်အလက်များအား ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းတို့အတွက် Infinix နှင့် ၎င်း၏ လက်အောက်ခံများနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအပေါ် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ကို စွန့်လွှတ်ရမည် ဖြစ်ပါသည်။
V. သတင်းအချက်အလက်များ ထိန်းသိမ်းခြင်း
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များ အားလုံးကို ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒနှင့်အညီ ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒတွင် ဖော်ပြထားသည့် ကိစ္စရပ်များ လုပ်ဆောင်ရန် လိုအပ်သည့် အချိန်ကာလအထိဖြစ်စေ၊ သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေများနှင့် စည်းမျဉ်းများအရ လိုအပ်သော သို့မဟုတ် ခွင့်ပြုထားသော အချိန်ကာလအထိဖြစ်စေ သိမ်းဆည်းထားမည်ဖြစ်သည်။
VI. တည်နေရာအခြေပြု ဝန်ဆောင်မှုများ
Infinix ထုတ်ကုန်များတွင် တည်နေရာအခြေပြု ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ပံ့ပိုးပေးရာတွင် Global Positioning System (GPS) အချက်အလက်များ၊ Wi-Fi hotspot၊ Bluetooth သို့မဟုတ် သင့်ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသည့် ကယ်ရီယာ ကွန်ရက်၏ အချက်ပြဆစ်ကနယ်ထုတ်တာဝါတို့မှ ရယူနိုင်သော အချိန်နှင့်တစ်ပြေးညီ ပထဝီ-တည်နေရာဆိုင်ရာ အချက်အလက်များကို ကောက်ယူ၍ အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ သင့်ထုတ်ကုန်မှ GPS ဆက်တင်များသို့ ဝင်ရောက်ပြီး သင့် GPS အချက်အလက်များကို ဖွင့်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်း သို့မဟုတ် ပိတ်ခြင်းများ လုပ်နိုင်သော်လည်း Wi-Fi နှင့် သင့်ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသည့် ကယ်ရီယာ၏ မူဝါဒအပေါ် မတူညီသည့် သင့်ဝန်ဆောင်မှုပံ့ပိုးသည့် ကယ်ရီယာ၏ ကွန်ရက်မှ အချက်ပေး ဆစ်ကနယ်ထုတ်တာဝါ၏ ID နံပါတ်တို့ကိုမူ သင်ထိန်းချုပ်ခွင့်ရှိမည် မဟုတ်ပါ။
VII. ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ကာကွယ်ပေးခြင်း
သင့်ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းများကို တားဆီးရန်အတွက် သင့်လျော်သည့် ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ၊ နည်းပညာဆိုင်ရာနှင့် အဖွဲ့အစည်းပိုင်း လုပ်ဆောင်ချက်များကို လုပ်ဆောင်ခြင်းဖြင့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ကြိုးပမ်းကာကွယ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကာကွယ်နည်း အမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုရန်နှင့် ပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်သလို လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော်လည်း အပြည့်အဝ လုံခြုံသည့် စနစ် သို့မဟုတ် နည်းပညာဟူ၍ မရှိပါ။ သို့သော်လည်း သင့်အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ကျိုးကြောင်းသင့်တင့်သလို လုပ်ဆောင်ပေးမည် ဖြစ်သော်လည်း မည်သည့် ဝက်ဘ်ဆိုက်၊ အင်တာနက် ထုတ်လွှင့်မှု၊ ကွန်ပျူတာစနစ်၊ ကြိုးမဲ့ချိတ်ဆက်မှုမှ အပြည့်အဝ လုံခြုံမည် မဟုတ်သည်ကို သတိပြုပါ။ ထို့ပြင် ကျွန်ုပ်တို့သည် အခြားသီးခြား တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီ အပလီကေးရှင်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများ၏ လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းတိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီ အပလီကေးရှင်းများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများမှ သင်နှင့်ပတ်သက်၍ ကောက်ယူထားသည့် အချက်အလက်များ လုံခြုံရေးအတွက်ဖြစ်စေ တာဝန်မရှိပါ။ ၎င်း တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်းမရှိသော တတိယပါတီများထံ သင့်အချက်အလက်အား မည်သို့လုံခြုံစွာ ထိန်းသိမ်းသည်ကို မေးမြန်းစုံစမ်းပါ။
အချို့သော အခြေအနေများတွင် သင်ရွေးချယ် မျှဝေထားသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များကို အခြားအသုံးပြုသူများမှ ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး ၎င်းတို့မှ ဖတ်ရှုခြင်း၊ စုဆောင်းခြင်း၊ ကူးယူခြင်း၊ ပြန်လည်ထုတ်ဝေခြင်း သို့မဟုတ် အသုံးပြုခြင်းများ ရှိနိုင်သည်ကို ဂရုပြုပါ။ ၎င်းအခြေအနေများတွင် သင်သည် မိမိရွေးချယ်မျှဝေမည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ဦးတည်း တာဝန်ယူရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်မျှဝေလိုသည့်၊ တင်သွင်းလိုသည့် ကိုယ်ရေးအချက်အလက်ကို ဂရုပြု၍ ရွေးချယ်သင့်ပါသည်။
VIII. အသက်မပြည့်သေးသူများအား ကာကွယ်ပေးခြင်း
ကျွန်ုပ်တို့သည် အသက်မပြည့်သေးသူများ၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်များအား ကာကွယ်ရေးကို အထူးအလေးထားပါသည်။ သင်သည် အသက်မပြည့်သေးသူ ဖြစ်ပါက သင့်အုပ်ထိန်းသူအား ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒကို နားလည်သည်အထိ ဖတ်ရှုစေရမည် ဖြစ်ပါသည်။ သင်သည် သင့်အုပ်ထိန်းသူထံမှ ကြိုတင်ခွင့်ပြုချက် ရရှိပြီးမှသာ ကျွန်ုပ်တို့ ဝန်ဆောင်မှုများကို အသုံးပြုခဲ့ကြောင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့ထံ အချက်အလက်များ ပံ့ပိုးပေးခဲ့ကြောင်း အာမခံရမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒအတွက်မူ အသက်မပြည့်သေးသူ ဆိုသည်မှာ ၎င်းအသက်မပြည့်သေးသူ ပုံမှန်နေထိုင်ရာ နိုင်ငံတွင်း တည်ဆဲဥပဒေများအရ သတ်မှတ်ထားသည့် အဓိပ္ပာယ်အတိုင်း ဖြစ်ရပါမည်။
IX. ကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါဒအား ပြောင်းလဲမှုများ
ဤမူဝါဒကို အခါအားလျော်စွာ ပြောင်းလဲပြင်ဆင်မှုများ ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤမူဝါဒကို ကျွန်ုပ်တို့ ပြောင်းလဲချိန်တွင် ကျွန်ုပ်တို့ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် အသိပေးစာ တင်ထားမည်မဟုတ်ဘဲ ဝက်ဘ်ဆိုက်တွင် ဤမူဝါဒကို တင်လိုက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ချက်ချင်းသက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။ ဤမူဝါဒကို အသစ်ပြောင်းလဲမှုများ ရှိမရှိ ပုံမှန်စစ်ဆေးသင့်ပါသည်။ မည်သူမည်ဝါ ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်သော အချက်အလက်များအား ကျွန်ုပ်တို့ စုဆောင်း၊ ပြုပြင်စိစစ်၊ အသုံးပြု၊ မျှဝေ၊ ထုတ်ဖော်၊ သိမ်းဆည်း၊ ထိန်းသိမ်း၊ ကာကွယ်ပေးသည့် ပုံစံလုပ်ဆောင်ပုံနှင့် ပတ်သက်၍ ဥပဒေအရ ပြောင်းလဲရန် လိုအပ်ပါက ပြင်ဆင်ထားသည့် မူဝါဒအား ထုတ်ပြန်ပြီးနောက်တွင် စုဆောင်းခဲ့သည့် သတင်းအချက်အလက်များကိုသာ ပြောင်းလဲမှု သက်ရောက်မည် ဖြစ်ပါသည်။
X. သက်ဆိုင်ရာ ဥပဒေနှင့် အငြင်းပွားမှု ဖြေရှင်းခြင်း
ဤမူဝါဒနှင့် ပတ်သက်၍ ထွက်ပေါ်လာသည့် အငြင်းပွားမှု၊ တောင်းဆိုမှု၊ အမြင်ခြားနားမှု သို့မဟုတ် အခြားအငြင်းပွားဖွယ် ဖြစ်ရပ်များကို ဟောင်ကောင်ဥပဒေနှင့်အညီ အုပ်စိုး၊ နားလည်ပြီး အဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူသွားမည်ဖြစ်ပြီး ဖြစ်ပွားရာနေရာ ဥပဒေနှင့် ငြိစွန်းမှုများကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားသွားမည် မဟုတ်ပါ။ ဤကိုယ်ရေးအချက်အလက် ဥပဒေနှင့် ပတ်သက်ပြီး အသာတကြည် ဖြေရှင်း၍ မရနိုင်သော အငြင်းပွားမှု သို့မဟုတ် အမြင်ကွဲပြားမှုများကို အနုညာတ စီရင်ဆုံးဖြတ်ရန် အသိပေးချက် တင်သွင်းသည့် အချိန်တွင် တည်ဆဲ Hong Kong International Arbitration Center မှ ထုတ်ပြန်ထားသော စည်းမျဉ်းများနှင့်အညီ Hong Kong International Arbitration Center (ဟောင်ကောင် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အနုညာတ စီရင်ရေးစင်တာ) (HKIAC) မှ ကြီးကြပ်မှုအောက်တွင် အနုညာတ စီရင်နည်းဖြင့် ဆုံးဖြတ်ပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။ အနုညာတ စီရင်ရာနေရာမှာ ဟောင်ကောင်တွင် ဖြစ်သည်။ စီရင်ရာတွင် သုံးမည့် ဘာသာစကားမှာ အင်္ဂလိပ်ဘာသာ ဖြစ်သည်။ ၎င်းအနုညာတ စီရင်မှု၏ ဆုံးဖြတ်ချက်မှ အတည်ဖြစ်ပြီး သက်ဆိုင်သူ နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးမှ လိုက်နာရမည်။
XI. မေးခွန်းများနှင့် ဆက်သွယ်ရန်
ကျွန်ုပ်တို့၏ ကိုယ်ရေးအချက်အလက် မူဝါနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းလိုသည်များ ရှိလျှင်ဖြစ်စေ၊ နယ်မြေတွင်း ကိုယ်ရေးအချက်အလက် ဆိုင်ရာ ဥပဒေများအား ချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ တိုင်ကြားလိုလျှင်ဖြစ်စေ (hello@infinixmobility.com) သို့ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။
Infinix Inc. 2017 မူပိုင်ခွင့် မှတ်ပုံတင်ထားပြီး ဖြစ်သည်။ ရပိုင်ခွင့် အားလုံးကို ထိန်းသိမ်းထားသည်။
Copyright © 2019 InfinixMobility.com|ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ|သတ်မှတ်ချက်များ|